बझाङको क्वारेन्टाइनमा एक युवकद्वारा आत्महत्या- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
लकडाउन आंशिक खुलेयता बजारमा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल लगायतको अभाव त छैन, तर उपभोग प्रचलनमा ठडिएको वर्गीयताको पहाडले न्यून वर्गलाई प्रहार गरिरहेको छ ।
असार ८, २०७७ उषा थपलिया
पूर्ण पारिवारिक माहोल, हरेक दिन मेवा–मिष्टान्न, कोरोना भाइरसबाट बच्न आवश्यक परिवेशको सहज उपलब्धता, प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउने खानपान, प्रविधिले उपलब्ध गराएका मनोरञ्जनलगायत केहीबाट उच्च वर्ग वञ्चित छैन ।
आउँदा दिनको चिन्तासहित अलि साह्रोगाह्रो महसुस गर्न थालिसकेको मध्यम वर्ग अहिलेसम्म उच्च वर्गसँगै लय मिलाउन अभिशप्त देखिन्छ । दुई छाकको जोहोका लागि हरेक दिन श्रममा जोतिनैपर्ने वर्गका लागि भने सुरुआतबाटै यो अवस्था कष्टपूर्ण रह्यो । कोरोना सन्त्रासभन्दा बढी भोकको औडाहाबाट ती प्रताडित छन् ।
देशवासी या प्रवासी दुवैतर्फका श्रमजीवीको हालत उस्तै छ । भारतमा मजदुरी गरिरहेका नेपालीहरू सीमामा अलपत्र भए । तिनै वर्गका गर्भवती, सुत्केरी, अशक्त, बिरामीले भोगेका कष्ट झन् बयान गरिसक्नु छैन । विकल्प केही हुँदो हो त मुलुक प्रवेशका लागि महाकालीमा फाल हाल्नेसम्मको जोखिम कसैले मोल्ने थिएन । कोरोना भाइरसभन्दा बढी अनिश्चयभित्र जेलिएको दैनन्दिन समस्याले त्यो अवस्था निम्तिएको हो । अहिले भारतले सार्वजनिक यातायात खुकुलो बनाएपछि हजारौं नेपाली आधिकारिक रूपमै मुलुक भित्रिइरहेका छन् । अन्य मुलुकका लाखौं नेपाली श्रमजीवी पनि मातृभूमि फर्कन प्रतीक्षारत छन् । यसरी फर्केका नागरिकहरूको दीर्घकालीन रोजीरोटीको मेलो सरकारले कहिले सुनिश्चित गर्ने हो, ठेगान छैन ।
देशभित्रकै निम्नवर्गको अवस्था अझ भयावह देखियो । दिनहुँको कामबाट परिवार धान्दै आएकाहरूलाई सुरुदेखि नै चुलो बाल्न धौधौ परिरहेको छ । विकल्पका रूपमा थातथलोतर्फ पैदलै निस्किएकाहरूको लावालस्करले सडक भरियो । सामान्य अवस्थामा कल्पनै गर्न नसकिने लामो दूरीका लागि समेत पैदलयात्रा तय, त्यो पनि लालाबाला र कुम्लोकुटुरोसहित ! कारुणिक लाग्ने ती दृश्यभित्र ठाउँठाउँका अवरोध, हैरानी, अन्योल, अनागरिकलाई जस्तो व्यवहार लगायतका समस्त सास्ती खेप्नेलाई जति देख्नेलाई के थाहा हुन्छ ?
राजधानी छोड्न नसकेकाहरूको संकट उस्तै छ, जसलाई लक्ष्य गर्दै केही राहत वितरण भए । सरकारी निकायबाटै कुहिएका खाद्यसामग्री राहतस्वरूप ग्रहण गर्न त्यो वर्ग विवश भयो । उपभोगयोग्य राहत पाउनेहरूका केही दिन सहज भए । फेरि अवस्था उही । सीमित राहत बाँडिएको लामो समय बितिसकेको छ । त्यसपछि न अरू राहत न त अन्य मुलुकमा जस्तो आर्थिक सहायता । भोककै कारण नागरिकको प्राण गएको दृश्य सप्तरीमा मात्र हैन, संघीय राजधानीमै देखिइसक्यो । तर सरकारलाई यस वर्गको समस्याले छुन छाडेको छ । बरु समस्याग्रस्त समुदायलाई आफ्नो गच्छेअनुसार निरन्तर सहयोग गर्ने मनकारीहरूले उदारताको परिचय दिइरहेका छन् । सयौं भोका मानिसलाई दुई छाक खुवाउने काममा धेरै ठाउँका युवा लागेका छन् । समुदायले उनीहरूको काममा सहयोग गरिरहेका छन् । व्यक्तिगत तवरमा आफूले सकेको राहतस्वरूप खाद्यान्न सहयोग गर्ने व्यक्तिहरू पनि सक्रिय देखिन्छन् । देश–विदेशका व्यक्ति र संस्थाहरूले पनि स्वदेशको यो समस्या टार्न भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । यिनै केही सत्कर्मका कारण समस्या विकराल हुनबाट केही जोगिएको छ ।
जसोतसो जीवन धानिरहेकाहरूलाई पनि निरन्तर लम्बिरहेको अवस्था थेग्न हम्मे परिसकेको छ । व्यापारीहरूले जोखिम मोलेरै बजारमा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल लगायतको अभाव हुन दिएका छैनन् । तर उपभोग प्रचलनमा ठडिएको वर्गीयताको पहाडले न्यून वर्गलाई खुबै प्रहार गरिरहेको छ । आम्दानीको ठूलो हिस्सा बाहिरी खानपान, मोजमस्ती, मनोरञ्जन लगायतमा निर्धक्क खर्च गर्नु उच्चवर्गीय संस्कार नै हो । बाहिरी खर्चका सबै आयाम बन्द भएको अहिलेको अवस्थामा जति नै ठूलो घरायसी खर्च पनि तिनका लागि अति सामान्य ठहरिएको छ । बजारका प्रायः उपभोग्य पदार्थ भारी परिमाणमा तिनैले उठाउँछन् । उच्चवर्गीय यही उपभोग प्रवृत्तिका कारण तल्लो वर्ग मारमा परेको छ ।
एउटै परिवारभित्र पनि दुई फरक वर्गको झल्को पाइन्छ । बाहिरी कामकाजलाई मात्र आफ्नो दायित्व ठान्ने पुरुषहरूका लागि लकडाउन आरामको समयमा रूपान्तरित भयो तर महिलाका जिम्मेवारी भने कैयौं गुणा थपिए । गर्भवती, सुत्केरीहरूको अवस्था अझ बढी दयनीय । त्यसमाथि कोरोनासँगै बढेको घरेलु हिंसाले विश्वस्तरमै चिन्ता जगाइरहेको छ । नेपाल पनि यसबाट अलग छैन । महिला आयोगका हेल्पलाइन र प्रहरीमा परेका उजुरीले यसलाई पुष्टि गर्छन् । लकडाउन सुरु भएको एकमहिने अवधिमै महिला आयोगको हेल्पलाइनमा ६०४ र प्रहरीमा ४३२ वटा त्यस्ता उजुरी परे । त्यसयता पनि यी घटनामा कमी आएको छैन । यसबीच ४०० महिलाले आत्महत्या गरे । अभावले ल्याएको तनावसँग यी दुःखद घटनाको बढी सम्बन्ध छ ।
सबैले बसेर खाइरहेको यो बेला निरन्तर काममा घोटिने किसान वर्ग हुन् । तालुक मन्त्रालयबाटै कृषिकर्म नरोक्न सन्देश प्रवाह भैरहेको छ । तर यो कठिन घडीमा उनीहरूका उत्पादन बजार नपाएर फालिएका छन््, कुहिएर माटोमै मिलेका छन्, खाडलमा पुरिएका छन् । आफ्नो लगानी र श्रमको फलले त्यो दुरूहता खेप्दा किसानको मन कति कुँडिँदो हो ? स्वदेशी उत्पादनको यो हविगत हुँदा विगतदेखि कायम संयन्त्र र सम्बन्ध नबिगार्न ठेकेदारहरू अहिले पनि छिमेकी मुलुकका उत्पादनद्वारा बजार भरिरहेका छन् । देशको उत्पादनले नथेग्दा मात्र बाहिरी आवश्यक हुनुपर्ने हो । कृषि समस्या समाधानकै खातिर देशमा मन्त्रालयलगायत कृषिसम्बन्धी दर्जनौं संयन्त्र खडा छन् । ढोकैमा स्थानीय सरकार छ । यी सबै निकायले चाहे किसानका उत्पादन उपभोक्तासम्म नपुग्ने कुरै हुँदैन । तर न्यून वर्गमै दरिने किसानका समस्याप्रति चासो राख्ने फुर्सद तिनमा कहाँ ?
हैसियतको पृथक्तासँगै यसका असरहरू समाजका विभिन्न क्षेत्रमा परेको देखिन्छ । अहिलेको प्रतिकूलता र भविष्यको कामको चिन्ताले पनि अधिकांशलाई गाँजेकै छ । विश्वतहमै मूल समस्याका रूपमा चर्चा गरिएको कामको संकटबाट बढी चिन्तित हुने तल्लो वर्गकै मानिस हुन् । अहिले लकडाउन धेरै खुकुलो गरिएको छ । तोकिएका कामकाज सुचारु भएका छन् तर यसबाट लाभ लिने भनेको आफ्नै व्यवसाय हुने, सवारीसाधन हुने माथिल्लो वर्गकै मानिसले हो । सार्वजनिक सवारीसाधनको अभावका कारण कार्यस्थलसम्म जान नसक्ने नागरिकहरू प्रशस्तै छन् । लामो समयदेखि अनुत्पादक अवस्थाले मानिसमा निराशा र कुण्ठा ह्वात्तै बढाएको छ । वर्तमान परिस्थिति र आफ्नो हैसियतबीच सन्तुलन गर्न नसक्नेका मनोदशा आत्महत्यामा पुगेर टुंगिएको देखिन्छ । प्रहरी रेकर्डअनुसार, लकडाउन सुरु भएदेखि जेठ १० सम्मको अवधिमा ९६३ जनाले आत्महत्या गरे । त्यसयता दैनिक सरदर १७ जनाले आत्महत्या गर्ने गरेका छन् । यो असाध्यै चिन्ताजनक अवस्था हो । एक्लोपना, तनाव र डिप्रेसनबाट पीडित हुनेहरूको लेखाजोखा छैन । कोरोना त्रासदीसँगै निम्तिएका विभिन्न प्रतिकूलताका कारण यो अवस्था निम्तिएको हो नै, तर समाजमा कायम वर्गीय असमानताले यसलाई विकराल बनाउन झनै मलजल गरेको छ ।
प्रकाशित : असार ८, २०७७ ०९:४२